Itekisi ishayise yayongena esitolo eThekwini | News24
Itekisi ishayise yayongena esitolo eThekwini
Durban – Kulimale abagibeli abangu-8, kwalimala inqwaba, ngesikhathi itekisi ingena esitolo enkabeni yedolobha laseThekwini ngoLwesine.
Okhulumela iRescuecare uGarrith Jamieson uthe abosizo lokuqala baphuthume ekhoneni lomgwaqo uJohannes Nkosi (owawaziwa ngo-Alice) noJoe Slovo (Field) nokuyilapho bethole khona kushayisane amatekisi amabili.
Funda nalolu daba: UZuma uqoke isikhulu esisha seNPA
“Kubukeka sengathi itekisi elilodwa liwele irobhothi livaliwe kwadaleka ingozi. Lokho kudale ukuba enye itekisi ebandakanyeke engozini iphaphalaze iyongena esikolo,” usho kanje.
“Abosizo lokuqala bafike endaweni yesehlakalo bathola abagibeli sebephumile etekisi ngemuva kokusizwa abanye abantu, kanti abanye kubona bebelimele kakhulu.”
Abalimele bathole ukwelashwa endaweni yesehlakalo ngaphambi kokuba baphuthunyiswe e-Addington Provincial Hospital.